International giants: The four major international couriers are: DHL, ယူပီအက်စ်, TNT, Fedex
(1). The calculation method of the volume and weight of the four international express DHL, ယူပီအက်စ်, TNT, FedEX packages: (Length x Width x Height) (cm) ÷ 5000, note that the unit of length, width and height is cm
Destination, product name, volume, weight, whether it is live or magnetic, whether it isacustoms declaration, whether it isadesignated operator, and whether it has requirements on timeliness, စသည်တို့.
We areacompany specializing in international logistics, headquartered in Shenzhen, တရုတ်
1) ကျွန်ုပ်တို့သည်အလီဘာဘာ၏ရွှေအသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီဖြစ်သည်. တစ် ဦး တည်းသာအားကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီဒီအရည်အချင်းများရှိပါတယ်. ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ 11 years of
shipping experience, နှင့်ရေကြောင်းခရီးစဉ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိနိုင်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောသင်၏အိမ်သို့မဟုတ်အမေဇုံဂိုဒေါင်အဖြစ်
2) သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဂိုဒေါင်သို့လုံခြုံစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်ဆက်သွယ်ပါမည်, and then use DAP or
3) ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်, အများအပြားဖောက်သည်အသုံးပြုနေကြသည်. Factories often do not carefully
check all products, အရာထုတ်ကုန်ရောင်းပြီးနောက်ညံ့ဖျင်းသောအကဲဖြတ်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်. We will carefully check the products
4) အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းကဖောက်သည်တွေကိုအထူးလျှော့စျေးများစွာပေးလိမ့်မယ်, our transportation is responsible for
A:မဟုတ်ဘူး, not necessary. We can palletize your cargo based on Amazon requirements in our origin warehouse or at the
A:မဟုတ်ဘူး, not necessary. We can help you if you do not haveacontinuous bond. You can choose to use our bond for free
A:Shenzhen Flydis အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်.
ADD：No.101-102, Yinshan ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာ, Bao'an အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်, ရှန်ကျန်း, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်.